टन्सिलबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यी हुन् घरायसी औषधि - Lekbesi Khabar
टन्सिलबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यी हुन् घरायसी औषधि
काठमाडाैँ : टन्सिलका कारण तपाईले धेरै दुख पाउनु भएको होला । मौसममा आउने परिवर्तन पछि रुघा लाग्ने र टन्सिल हुने सामान्य जस्तै भएको हुन्छ । सामान्यता मौसममा आउने परिवर्तनका साथै चिसो तातो खान आदीका कारण टन्सिल हुने गर्छ ।
टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या पर्छ । राम्रोसँग खान र पानी निल्न पनि नसक्ने भएपनि खानपानमा समस्या नपर्ने कुरै भएन । टन्सीलबाट दुख पाएर मानिसहरु मेडिकलबाट विभिन्न खालका औषधि ल्याएर खाने गर्छन् । तर टन्सिलको उपचारका लागि घराउसी विधिले निकै फाइद पुग्छ ।
टन्सिलबाट आराम चाहिएको खण्डमा अत्याधिक पानी पिउनु जरुरी छ । सूप, जूूस तथा अन्य पेय पर्दाको प्रयोग बढी गर्नु आवश्यक छ । पानी पिउँदा गला चिसो रहन्छ । तर पेयपदार्थमा चिया, कफी या रक्सीलाई भने पूर्णरुपमा त्याग्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा महले पनि फाइदा पु-याउँछ ।
१७ कार्तिक २०७६, आईतवार १३:०४ November 3, 2019
देउवालाई ‘घामड शेरे’ भन्दै प्रचार गरेपछि नेविसंघले दियो चेतावनी, आसिफले मागे माफी
तिहारको अन्त्यसँगै शुरु भयो दार्चुलामा जात्राको रौनक